Ahoana no ahafantaranao ireo mpanjifanao B2B amin'ny fianarana milina | Martech Zone
Ahoana no hahafantaranao ireo mpanjifanao B2B amin'ny fianarana milina
Talata, Martsa 31, 2020 Talata, Martsa 31, 2020 Emily Johnson
Ny orinasan-tserasera B2C dia raisina ho mpihazakazaka voalohany amin'ny laharam-pahamehana ataon'ny mpanjifa. Fantsona maro samihafa toy ny e-varotra, media sosialy, ary varotra finday no nahafahan'ny orinasa toy izany nanamboatra marketing ary nanolotra serivisy ho an'ny mpanjifa tena tsara. Indrindra indrindra, ny angon-drakitra marobe sy ny fanadihadiana an-dàlana amin'ny alàlan'ny fomba fianarana ny milina dia nahafahan'ny mpahay tetikady B2C hahafantatra tsara ny fihetsiky ny mpanjifa sy ny asany amin'ny alàlan'ny rafitra an-tserasera
Ny fianarana milina koa dia manolotra fahaiza-manao vao misondrotra hahazo fahalalana momba ny mpanjifa mpandraharaha. Na izany aza, ny fananganana ny orinasa B2B dia mbola nanomboka. Na eo aza ny fitomboan'ny lazan'ny fianaran'ny milina, dia mbola misy fisafotofotoana be ihany momba ny fahafahany mifanaraka amin'ny fahatakarana ankehitriny Serivisy ho an'ny mpanjifa B2B. Andao ary hamafana izany anio.
Mianatra milina hahalala modely amin'ny fihetsiky ny mpanjifa
Fantatsika fa ny fianarana ny milina dia kilasy algorithma tsotra natao hanahaka ny faharanitan-tsika nefa tsy misy baiko mazava. Ary io fomba io no manakaiky indrindra ny fomba ahalalantsika ny lamina sy ny fifandraisana manodidina antsika ary ahatongavantsika amin'ny fahalalana avo kokoa.
Ny hetsi-panentanan'ny B2B nentim-paharazana dia manodidina ny angona voafetra toy ny haben'ny orinasa, ny vola miditra, ny kapitalisma na ny mpiasa, ary karazana indostrialy sokajin'ny kaody SIC. Saingy, fitaovana ianarana milina voalamina tsara manampy anao hizara tsara ny mpanjifa mifototra amin'ny fampahalalana tena izy.
Izy io dia mamaritra ny fomba fijery mifandraika amin'ny filan'ny mpanjifa, ny toetra, ny safidiny ary ny fitondran-tenany momba ny vokatrao na serivisinao ary mampiasa ireo fomba fijery ireo hanatsarana ny hetsika marketing sy varotra ankehitriny.
Fianarana milina ho an'ny fizarana data momba ny mpanjifa
Amin'ny alàlan'ny fampiharana ny fianarana milina amin'ny angon-drakitry ny mpanjifa rehetra angoninay amin'ny alàlan'ny asan'izy ireo amin'ny tranokalanay, ny mpivarotra dia afaka mitantana haingana sy mahatakatra ny tsingerin'ny fiainan'ny mpividy, ny tsena amin'ny fotoana tena izy, mamolavola programa tsy fivadihana, mamorona fifandraisana manokana sy mifandraika, mahazo mpanjifa vaovao sy mitazona mpanjifa sarobidy mandritra ny fotoana lava kokoa.
Ny fianarana ny milina dia manome ny fizarana mandroso ilaina amin'ny maha-izy azy manokana. Ohatra, raha manana tanjona ny orinasa B2B anao manadio ny zavatra niainan'ny mpanjifa ary manamafy ny maha-zava-dehibe ny fifandraisana tsirairay, ny fizarana marina ny angon-drakitra ho an'ny mpanjifa dia afaka mitazona ny lakile.
Na izany aza, mba hitrangan'izany dia mila mitazona angon-drakitra tokana sy madio ianao ahafahan'ny fianarana milina miasa ao aminy tsy misy manahirana. Noho izany, raha vao manana rakitra madio toy izany ianao dia afaka mampiasa machine machine hizara ny mpanjifa mifototra amin'ireo toetra voalaza etsy ambany:
Mila / toetra mifototra amin'ny vokatra
Mianatra milina hanolotra paikady miorina amin'ny fironana
Raha vantany vao mizara ny angon-drakitry ny mpanjifa ianao, dia tokony ho afaka manapa-kevitra ny amin'izay hataony mifototra amin'ity data ity. Ity misy ohatra iray:
Raha mitsidika ny fivarotana enta-mavesatra an-tserasera ireo millenium any Etazonia, mamadibadika fonosana hijerena ny habetsaky ny siramamy ao anaty marika momba ny sakafo, ary mandeha tsy mividy, ny fianarana milina dia afaka mamantatra izany fironana izany ary mamantatra ireo mpanjifa rehetra nanao ireo fihetsika ireo. Ireo mpivarotra dia afaka mianatra avy amin'ny angon-drakitra tena izy ary manao zavatra mifanaraka amin'izany.
Fianarana milina hanaterana ny atiny mety amin'ny mpanjifa
Talohan'izay, ny marketing amin'ny mpanjifa B2B dia nahitana famoahana atiny izay misambotra ny mombamomba azy ireo amin'ny hetsika fampiroboroboana amin'ny ho avy. Ohatra, mangataka firaka hamenoana takelaka iray hampidinana e-book manokana na hangataka fampisehoana demo.
Na dia mety hahazo fitarihana aza ny atiny toy izany, ny ankamaroan'ireo mpitsidika tranonkala dia tsy sahy mizara ny ID-n'izy ireo na ny nomeraon-telefaon'izy ireo fotsiny hijerena ny atiny. Araka ny ny valin'ny fanadihadiana nataon'ny Manifest, 81% ny olona nandao ny endrika an-tserasera mandritra ny famenoana azy. Ka tsy fomba azo antoka hiteraka fitarihana izany.
Ny fianarana milina dia mamela ny mpivarotra B2B hahazo fitarihana kalitao avy amin'ny tranokala nefa tsy mitaky azy ireo hameno ireo fisoratana anarana. Ohatra, ny orinasa B2B dia afaka mampiasa ny fianarana milina hamakafaka ny fitondran-tenan'ilay mpitsidika ary maneho ny atiny mahaliana amin'ny fomba manokana kokoa amin'ny fotoana mety.
Ny mpanjifa B2B dia mihinana atiny tsy miorina amin'ny filan'ny fividianana fotsiny fa koa amin'ny teboka misy azy ireo amin'ny dia mividy. Noho izany, ny fanolorana ny atiny amin'ny teboka fifanakalozan-kevitry ny mpividy manokana sy ny fampifangaroana ny zavatra ilain'izy ireo amin'ny fotoana tena izy dia hanampy anao hahazo fitarihana faran'izay betsaka ao anatin'ny fotoana fohy.
Mianatra milina hifantoka amin'ny fanompoana tena
Ny fanompoana tena dia manondro rehefa mahita ny fanampiana ny mpitsidika / mpanjifa
Noho izany antony izany, fikambanana maro no nampitombo ny tolotra serivisin'izy ireo manokana mba hanomezana traikefa mpanjifa tsara kokoa. Ny serivisy samirery dia tranga fampiasa matetika amin'ny rindranasa fianarana milina. Chatbots, assistants virtuel, ary fitaovana maro hafa nohatsaraina AI dia afaka mianatra sy maka tahaka ny fifandraisan-davitra toy ny masoivohon'ny serivisy ho an'ny mpanjifa.
Ny fampiharana ny serivisy samirery dia mianatra amin'ny zavatra niainana taloha sy ny fifandraisana mba hanatanterahana asa sarotra kokoa rehefa mandeha ny fotoana. Ireo fitaovana ireo dia mety hivoatra amin'ny fanatontosana fifandraisana ilaina amin'ny mpitsidika tranokala ka hatramin'ny fanatsarana ny fifandraisan'izy ireo, toy ny fahitana fifandraisana misy eo amin'ny olana sy ny vahaolana.
Ankoatr'izay, ny fitaovana sasany dia mampiasa fianarana lalina mba hanatsarana hatrany, ka mahatonga ny fanampiana marina kokoa ho an'ireo mpampiasa.
Tsy izany ihany fa ny fianarana milina dia misy fampiharana hafa isan-karazany. Ho an'ny mpivarotra dia io no lakilena mety hianaranao ireo sombin-tsolika sarotra sy ilaina, ny fihetsik'izy ireo ary ny fomba fifandraisany amin'ireo mpanjifa amin'ny fomba mifandraika amin'izany. Amin'ny alàlan'ny fanampiana anao hahatakatra ny lafiny samihafa amin'ny mpanjifa, ny teknolojia fianarana ny milina dia tsy isalasalana fa hitondra ny orinasa B2B anao amin'ny fahombiazana tsy manam-paharoa.
Tags: b2bserivisy ho an'ny mpanjifa b2bhetsiky ny mpanjifafihetsiky ny mpanjifatahiry ho an'ny mpanjifademografika ho an'ny mpanjifatsingerin'ny ain'ny mpanjifasandan'ny mpanjifafianarana lalinafianarana milinafanadihadiana lalinasamy mikarakara ny tenanykaody sicmpanampy virtoaly
Emily Johnson dia consultant marketing manana traikefa 10 taona amin'ny fanatanterahana ny tetikady marketing. Amin'izao fotoana izao dia izy no lehiben'ny departemantan'ny marketing Blue Mail Media, orinasa vahaolana angon-drakitra B2B malaza monina any Irving, Texas.
Symbl.ai: Sehatra fampivelarana ho an'ny faharanitan-tsaina